Ny fitsidihan'ny Papa manan-tantara ny Emira Arabo Mitambatra dia voamarina
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fitsidihan'ny Papa manan-tantara ny Emira Arabo Mitambatra dia voamarina
Ny birao fanaovan-gazety an'ny Holy See dia nanambara ny fandaharana ofisialin'ny dian'ny Papa tany Emira Arabo Mitambatra tamin'ny 3 ka hatramin'ny 5 Febroary 2019.
Fotoana ifantohan'ny fitsidihana dia ny: ny fihaonana eo amin'ny samy mpivavaka, ny fitsidihana ofisialy ny Zanak'andriana, ny fivoriana ao amin'ny Moskea Lehibe ny Sheikh Zayed ary ny lamesa any Abu Dhabi. Handao ny Vatican City ho any Emira Arabo Mitambatra ny Papa ny alahady 3 febroary amin'ny 1.00:10 tolakandro. Ny fahatongavana ao amin'ny seranam-piaramanidina filoham-pirenena Abu Dhabi dia kasaina ho amin'ny XNUMX alina.
Ny Alatsinainy 4 Febroary, amin'ny 12.00 maraina, lanonana fandraisana no voalahatra eo amin'ny fidirana amin'ny lapan'ny filoham-pirenena sy ny fitsidihana ofisialy ny Zanak'andriana. Amin'ny 5.00 hariva dia voalahatra ny fivoriana manokana miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitry ny loholona Silamo ao amin'ny Grand Mosque of Sheikh Zayed, ary amin'ny 6.10 hariva ny fivoriana iraisan'ny samy hafa finoana ao amin'ny Fahatsiarovana an'ny Mpanorina, izay hitenenan'i Papa lahateny.
Ny talata 5 febroary amin'ny 9.15 maraina dia hitsidika ny katedraly Abu Dhabi i Francis ary amin'ny 10.30 dia hankalaza ny lamesa ao amin'ny Zayed Sports City izay hitondrany ny homily. Amin'ny 12.40 ny lanonana fanaovam-beloma dia hatao ao amin'ny seranam-piaramanidina filoham-pirenena Abu Dhabi. Amin'ny 1.00 hariva dia efa voalahatra ny fiaingana. Ny fahatongavana any Roma dia voalahatra amin'ny 5.00 hariva ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Rome-Ciampino.
“Dingana manan-tantara ny Papa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Ny fitsidihana voalohany nataon'ny Papa Francis tany amin'ny saikinosy Arabo dia fotoana iray ifampiresahana eo amin'ireo Kristiana sy Silamo, ”hoy ny Eveka Paul Hinder, praiminisitra mpisolo toerana ny faritra atsimon'i Arabia, izay misy ny Emira Arabo Mitambatra, Oman.
"Miarahaba ny Papa amin'ny fo malalaka izahay ary mivavaka amin'ny tenin'i St. Francis of Assisi:" Tompo ô, ataovy fitaovana ho an'ny fiadananao izahay. " Manantena izahay fa ny fitsidihan'ny apôstôly dia dingana iray lehibe eo amin'ny lalan'ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny Silamo sy ny Kristiana ary manampy amin'ny fahatakarana sy ny fandriampahalemana any Moyen Orient ”
Naato ny asany! Serivisy fiaramanidina Fastjet any Tanzania